Daraasad lagu ogaaday sida aad isaga fogeyn kartid cudurrada halista ah - Aayaha
in TALOOYIN CAAFIMAAD
Jimicsiga iyo isticmaalka cunto isku dheelitiran waxay ka qeyb qaataan sare u qaadidda caafimaadka
Haweenka iyo ragga waxay noolaan karaan sannooyin badan iyadoo aysan ku dhicin cudurrada kansarka, wadne xanuunka iyo sokorowga, sida ay muujineyso daraasad uu sameeyay joornaalka ka faallooda arrimaha caafimaadka ee BMJ.
Tallaaboyinka qofka u horseedi kara caafimaad dheeraad ah waxaa ka mid ah in uu sameeyo jimicsi joogto ah, cabitaan badan, la socodka miisaanka jirka, dheelitiridda cuntooyinka, iyo in laiska ilaaliyo cabidda sigaarka.
Dr Frank Hu oo ka tirsan Jaamacadda Harvard, gaar ahaan kulliyadda caafimaadka, oo ku sugan Boston ayaa sheegay in daraasadda ay xambaarsan tahay farriin muhiim u ah bulshada.
Muxuu yahay ku noolaanshaha hab caafimaad leh?
Daraasadda waxaa ra’yi looga aruuriyay qaar kamid ah dadka 50 jirka ah, kuwaasoo laga ogaaday in tallaabooyinka soo socda afar kamid ah ama shan kamid ah ay sameeyaan.
In aysan weligood Sigaar cabin
Inay qaataan cuntooyin isku dheelitiran
inay maalin kasta sameeyaan 30 daqiiqo oo jimicsi ah
inay isku dheelli tiraan dhirirkooda iyo miisaankooda
In aysan cabin maandooriyaha khamriga
Khudaarta iyo miraha waxay sare u qaadaan caafimaadka
Haweenka iyo ragga sheegay in ay afar kamid ah tallaabooyinkaas si joogto ah u sameeyaan ayaa la saadaaliyay in sanado badan ay noolaan karaan, iyagoo ka badbaadi kara cudurrada ugu halista badan sida Kansarka, wadno xannuunka iyo macaanka.
Dadka ugu caafimaadka wanaagsan ayaa la ogaday in aysan weligood sigaar cabin
Maxaa diiradda loo saaray cuduradan?
Kansarka, macaanka iyo wadna xannuunka waa cudurrada inta badan ku dhaca dadka marka ay da’ noqdaan, waxaana si dhaw loola xiriiriyaa hab nololeedka aadanaha.
Cayilka daran waxaa lala xiriiriyaa 13 nooc oo kamid ah Kansarka.
Noocyo ka mid ah kansarka ayaa lala xiriiriyaa hab nololeedka qofka
Laanta daraasaadka kansarka ee dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in afar kamid ah 10-kii nooc ee kansarka ah looga hortaggi karo hab nololeedka qofka, sida in laiska joojiyo hilibka warshadeysan, cunidda raashinka qolofta leh iyo qoraxda oo aad iska ilaaliso.
Tags: caafimaadCaafimaadkacudurradadaraasadkansarkasokorowgawadne xanuunka
Carrabka wayn ama dheer waa "sababta hurdo la'aanta"